Puntland oo dawladda Ethiopia ku eedaysay weerarkii Galkacyo ka dhacay. – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2009 12:00 b 0
Bosaso, Oct 09- dawladda Puntland ayaa si kulul uga jawaabtay weerarkii ka dhacay magaalada Galkacyo ee loo gaystay shaqsiyaad ka soo jeeda is maamulka Soomaalida Ethiopia, kuwaasi oo qaarkood la dhaawacay kuwana nolol lagu kaxaystay.
Kulan ay habeenkii xalay ahaa wada yeesheen madaxda ugu sar sarraysa dawladda Puntland iyo saraakiisha laamaga ammaanka Puntland, ayaa laga soo saaray war murtiyeed lagu looga xun-yahay dhacdadii weerar ee habeen hore loo gaystay dad shacab ah oo ku sugnaa xaafad ka mid magaalada Galkacyo, waxaana dawladda Puntland ay falkaasi ku eedaysay in ay ka danbeeyeen ciidanka Ethiopia.
Kulanka laga soo saaray war murtiyeedka lagu dhaleecaynayey falkaasi weerar ayaa ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Boosaaso waxaana ka qayb-galay madaxweynaha Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’ iyo kuxigeenkiisa C/samad Cali Shire, qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo baarlamaanka, waxaana lagu diyaariyey halkaasi qoraal loo diray dawladda Ethiopia oo ka hadlayey Ethiopia in ay deg deg uga soo jawaabto xad-gudubka ay deegaannada Puntland ku gashay.
Taliyaha ciidanka bileyska Puntland Axmed Xassan Cali ‘Afay’, oo kulankaasi idaacadda Daljir uga warramaya iyo tallaabada maamul ahaan u qorshaysan, ayaa sheegay Puntland in aysan marna ogayn ogalaanna doonin tallaabo noocaan oo kala ah Ethiopia in ay ka fuliso deegaannada Puntland, waxaana uu intaasi ku daray tallaabadaasi in ay ahayd mid wax loogu dhimayey nabadda iyo jiritaanka dawladda Puntland.
Md. Afay, waxaa uu sheegay Puntland in ay ogtahay cidkasta oo ku soo xad-gudubta deegaannadeeda laakiin wuxuu sheegay xilliga tallaabadaasi la qaaday in ay ahayd xilli danbe oo habeenimo ah, daqiiqado gudahoodna ay gobolka kaga baxeen ciidankii falkaasi gaystay.
Hadalkaan ayaa ka danbeeyey kadib markii habeenimadii Khamiista guri ku yaalla magaalada Galkacyo ciidamo hubaysa oo Ethiopian ahi ugu dhaceen dadkii degganaa, iyagoo goobtaasi qaar ku dhaawacay kuwo kalana ku kaxaystay inkastoo xilli danbe ninkii ay afduubteen dhaawiciisa laga soo helay meel ka baxsan magaalada Galkacyo.
Labadii qof oo ciidankaasi ay dhaawaca u gaysteen ayaa hadda lagu dabiibayaa isbtaalka Dhaga-cadde ee magaalada Galkacyo, waxayna ka gaabsadeen xilli aan booqanay in ay warbixin ka dhiibaan sidii ay wax u dhaceen.
Arrintaasi ayaa caro iyo muran badan ka dhax abuurtay bulshada ku dhaqan deegaannada Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug, waxaana loo fasirtay isla markiiba tallaabadaasi in ay tahay mid lagu kala fogaynayo dadka reer Puntland iyo qabaa’ilka dega is maamulka Soomaalida Ethiopia.
Dhowr jeer oo hore ayaa falal noocaan oo kale ah laga dhax fuliyey gudaha magaalada Galkacyo xilligaasi oo ahaa markii uu Puntland madaxweynaha ka ahaa Gen. Cadde Muuse Xirsi.
C/fitaax Cumar Geeddi’
Dawladda Puntland oo xayiraaddii ka qaaday idaacadda VOA-da, qaybta af-Somaliga.
Yuusuf Indha-cadde oo la sii daayey, laguna eedeeyey in uu qarsoodi ku soo galay Ugandha.